स्की चश्मा कसरी चयन गर्ने?
एक लामो समय खेलाडी लागि, तपाईं यो लेख तिनीहरूलाई लागि छैन स्की चश्मा आवश्यक कसरी महत्त्वपूर्ण र किन, त्यसैले बताउन कुनै आवश्यकता छ जसले। यो चुचुराहरूको र गति जित्न जाँदैछन् गर्नेहरूका लागि हो। यो एक आभूषण वा सनक छैन यो अनिवार्य उपकरण को विशुद्ध कार्यात्मक टुक्रा छ, र आफ्नो विकल्प गर्न दृष्टिकोण उपयुक्त - सबै को पूर्वावलोकन मा शुरुआती कि स्की चश्मा सम्झना छ। यो तपाईँले किन्न अघि स्की चश्मा आफ्नो व्यावहारिक सुविधाहरू आकलन र केवल उपस्थिति पछि गर्नुपर्छ भन्ने हो।
छनौट गर्दा तपाईंलाई थाहा के गर्नुपर्छ? पहिले, स्की चश्मा - कारण घटेको र धक्का गर्न हिउँ crumbs, बरफ, शाखा, यांत्रिक क्षति देखि आँखा र अनुहार रक्षा छ। हामी बिर्सनु हुँदैन स्कीइंग तेज गैर-Motorized प्रकारको र बरफ को पनि banal टुक्रा आँखा को गति मा मारा सबैभन्दा अप्रिय परिणाम संग पतन हुन सक्छ। तसर्थ, स्की चश्मा आराम मिलेको र खेलाडी अनुहारमा आसन्न छ जो एक मास्क, को रूप लिनुपर्छ। मुखौटा साँस प्रतिबन्ध र ब्लक हुँदैन परिधीय दृष्टि। जो को सामाग्री गरे स्की चश्मा हल्का र बलियो एकै समयमा हुनुपर्छ, र सारा संरचना सुरक्षित। यो टोप मा राख्दै निरन्तर समायोजन र कडा सुत्छन् गर्न, हुनेछ किनभने ध्यान, समायोजन र मिलाइएको को संभावना, साथै गम अंक को समग्र गुणस्तर भुक्तान गर्नुपर्छ।
स्की चश्मा को मुख्य भाग - एक पारदर्शी प्लेट वा लेन्स। निस्सन्देह, यो, यो के गरेको छ एकै नजरमा निर्धारण गर्न असम्भव छ, त्यसैले तपाईं भरोसा गर्नुपर्छ जसको अर्थ तपाईं बस एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा निर्माताहरु संग, हेर्न चश्मा किन्न आवश्यक लेबल, मा inscriptions छन्। तर के यो लेन्स पारदर्शी छ कसरी र दिंदैन त्यो distortions भने, एकै नजरमा र निर्धारण गर्नुपर्छ सक्नुहुन्छ।
साथै, यो बरफ हुनेछ जसमा अवस्था थाहा आवश्यक छ। यो मा लेंस को रंग निर्भर गर्दछ। सबै पछि, स्की चश्मा र एउटा उज्यालो सेतो हिउँ ढलान धेरै महत्त्वपूर्ण छ जो सूर्य, देखि आँखा जोगाउन डिजाइन। फिल्टर को ठूलो सेट, तर यी निर्देशनहरू इरादा गर्दै छन् किनभने शुरुआती को लागि, यो सबै भन्दा उपयुक्त तिनीहरूलाई कुनै पनि उपयोगी परिवेश प्रकाश अवस्था मा चढेर लागि एक बहुमुखी र उपयुक्त मानिन्छ जो पहेलो छाया, फिल्टर हुनेछ लागि हो।
निस्सन्देह, यो खेलाडी गर्न चश्मा मा, उपस्थिति को वंश समयमा हराएको छैन fogging देखि वेंटिलेशन र सुरक्षा हुनुपर्छ। वर्तमान हावा vents हुनुपर्छ मुखौटा को परिधि वरिपरि यसो गर्न। आफ्नो आकार, स्थान र संख्या विशेष गणना, र यो किन उपकरण मात्र एक सम्मानित निर्माता देखि खरिद गर्नुपर्छ अर्को कारण हो। यस्तो सानो कुरा हो, fogging जस्तै, यो सानो महत्व को शुरुवात गर्न लाग्न सक्छ, तर यो मास्क को ढलान बीचमा समय समयमा एक टोप गर्न rises कि विचार र cooled गर्नुपर्छ, र त्यो फेरि तातो अनुहार कम थियो, त्यो र अन्धो खेलाडी मा भागने सजिलै अप कुहिरो सक्छ उच्च गति। यहाँ हामी अर्को नियम उल्लेख गर्नुपर्छ: कहिल्यै विशेष कोटिंग fogging विरुद्ध सुरक्षा तपाईंलाई सजिलै बिगार्न सक्छ रूपमा, लेन्सको वा रुमाल, वा विशेष गरी हात को भित्र सतह हटाउन गर्नुपर्छ।
म मेरो अनुभव सही स्की उपकरण, बारी मा, स्किइङ देखि सबै भन्दा आनन्द प्राप्त हुनेछ जो, चयन गर्न मदत गर्नेछ भन्ने आशा।
पहाड बाइक Stels नेभिगेटर 510: विशेषताहरु, वजन, समीक्षा। Stels नेभिगेटर 510 को लागि एक मोटर कसरी बनाउने?
छोराछोरीको साइकिल मेरिडा: समीक्षा। छोराछोरीको साइकल मेरिडा डकार: व्हील कसरी जुटाउने?
साइकल डिस्क ब्रेक सेट: प्रक्रिया को सुविधाहरू
PSP-राइफल। एयर राइफल्स PCP: समीक्षा, समीक्षा, मूल्य र दर्जा
मुक्केबाज पन्जा कसरी चयन गर्ने?
"Claritin": दबाइ को प्रयोगको लागि निर्देशन
अचार संग चिकन कसरी खाना पकाउनु
आर्य आवास: अवधारणा र परिभाषा
Olesya Vladykina: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, फोटो
प्रकृतिमा नियमित पालीड्रारा
कसरी कुनै पनि समस्या बिना टर्मिनल, वा खरीद मार्फत "स्टीम" मा पैसा राख्न!
Sergey Koshonin: जीवनी र काम
पश्चात्ताप को प्रार्थना - परमेश्वरले मिलाप गर्न तरिका
Sima (माछा): वर्णन, palatability क्यालोरी पकाउने व्यञ्जनहरु
मेक्सिकोमा गुडिया को द्वीप: एक eerie स्थान